Isilimela 20, 2018 admin
Bithumb bebulewe for $ 31M kwaye ime notsalo
Bithumb, enye phantsi konxibelelwano cryptocurrency inkulu eMzantsi Korea ngu volume sorhwebo, into zokumisa iinkonzo idipozithi asethi kunye nokurhoxiswa emva imigewu weba 35 billion won $31 million evela eqongeni.
Le nkampani wathi isaziso namhlanje ukuba lomnqweno yimfumba kwenzeka phakathi ngoLwesibili emva kwexesha kude ekuseni ngoLwesithathu ixesha Korean. Bithumb wathi ilahleko ziya kuhlawulwa yi eqongeni.
sixeko Bitcoin Slovenia iya kuqhuba 450 kwiivenkile amukela Bitcoin
A 'City Bitcoin' kulindeleke ukuba ukuvula eLjubljana, batwabulule phezu 250,000 yezikwere kunye uqhayiso ngaphezu 450 iivenkile kunye nezinye izinto ezinxulumene cryptocurrency ukuba bonke amukela Bitcoin ntlawulo.
Ngaphandle zokuphuma zokuthenga, emzini Bitcoin (BTC) Izoba 70 imigoqo kanye zokudlela, 17 kumadanyana, izifundo mini-Golf, a waterpark neziko ukuzihlaziya bhanyabhanya 3D kunye Crystal Palace, malunga ekujikeni, nasenqabeni ephezulu ku Slovenia.
US oovimba dollar ifoni xa ehlola & imiphumela eshicilelwe
Ekuqaleni kulo nyaka, Ayikwazi ukusebenzisa waqesha yabameli ukuba enze uhlolo lunomkhethe inani Tethers enokusebenziseka, kwakunye koovimba lwemali.
Le nkampani iye igunya ukwenza iimviwo mda le balances kwiibhanki ukusebenza kwaye kwakhona amakhulu amaphepha amaxwebhu afanelekileyo. i kubangela “ingxelo elubala” ngoku ipapashwa
Ikamva cryptocurrency trust
Kuye lubonise ukuba asinguye wonke ubani ofuna ukuba ahlawule irhafu yakhe Bitcoin Holdings ngenxa yezizathu zobuqu okanye ngenxa yezizathu nefarious. kunjalo, i IRS kwenzeke ukutshintsha isimo kwayo ukuphatha cryptocurrency njengomhlaba. Yeyona ngumba iye yavusa iingxoxo ezininzi kwixa elidlulileyo kwaye kungenzeka ukuba iqhubeke ixesha elithile.
ngoko ke, bonke abantu baseUnited States kufuneka ahlawule irhafu kwi-inventri zazo cryptocurrency kunye notyalo. kunjalo, kukho uphendlo ekhulayo izicombululo ezisemthethweni kodwa kuvumela abasebenzisi ukuba (phantse) ukuphepha irhafu baya ngenye mabaqhelaniswe. Njengoko kusoloko kunjalo kwindlela yolawulo-mali, eziziimpazamo ezikhoyo umthetho zifumaneka nge uphando olufanelekileyo, ubuncinane de IRS ugqiba ukujongana nazo.
Emva kwengxoxo umdla kutshanje eyayithanda cryptocurrency trust. A trust crypto ikharensi a trust njengaye nawuphi na kwicandelo zemali, ngaphandle ukuba iqulethe imithombo lwemali kuphela crypto. Nangona ezi zithuthi ziphantsi irhafu, kukho ezinye iindlela zokunciphisa okanye eziphikisana irhafu. Oku akuthethi into ekufuneka kakubi kuthi njengoko IRS kungekudala uya kubhenca ukuziphatha yobuqhophololo.
bungabonakala iintlobo ezahlukeneyo trust. Kukho trust yokuhlala rhafu ngokwahlukileyo. Ukukhutshelwa kwezi Bitcoin okanye elinye cryptocurrency ukuya trust onjalo irhafu, njengoko trust ephilileyo ayikho werhafu eyahlukileyo. Elinye icebo kukuba intembeko non-grantee, apho UMKHUPHELI akukho rhafu. kunjalo, trust ngokwalo uhlawula irhafu kunye nokwabiwa onokuzihlawuliswa ngokwahlukileyo.
Inzuzo ingqinwa phantse lulo lonke cryptocurrency trust kukuba ezichaphazela irhafu zikarhulumente. kutshanje Forbes uqalise ezinye iimodeli umdla kulo mba, njengoko abathile States ziindawo ngcono kunabanye ukuba wafumana trust ezinjalo. New York ngokucacileyo ngaphantsi enomtsalane kulo mba njengoko bayazi kakuhle kwalo mthetho zayo “ubuqili zomthetho” wazi indlela ekunokuba luncedo ukuba cryptocurrency abasebenzisi. SaseNew York iye yasilela ekubeni cryptocurrency ixesha elithile.
Nangona cryptocurrency trust inokuba ezimbalwa iinketho umdla, ngayo kwakhona kucacile ukuba kukho ubungozi ezininzi. Ukuphepha irhafu naluphi na uhlobo, yebo esebenzisa ezisemthethweni, usoloko yingozi kubasebenzisi imali crypto, kwaye akukho mfuneko yokuba wenze umgudu. Nokuba ngaba okanye apho kuya kubakho nomdla olukhulayo cryptocurrencies uhlala ukuze kubonwe.
Kule vidiyo, I reflect on th...
Thenga, athengise, what should be done...
Post Previous:History of the cryptocurrency yokuqala
Post Next:Blockchain News 21.06.2018